ODD 11 - Tanàna sy fokonolona lovainjafy - Tily eto Madagasikara
ODD 11 - Tanàna sy fokonolona lovainjafy
Ahoana no hahatonga ny tanànantsika ho mitsinjo ny ho avy. misokatra ho an’ny rehetra ary azo antoka kokoa, indrindra ho an’ny zaza amam-behivavy sy ny olona manana fahasembanana. Manana andraikitra avokoa ny tsirairay hikolokolo sy hanatsara ny tanàna misy azy.
Tanjona 11 : Atao izay hisian’ny tanandehibe sy ny trano ivoaran’ny mahaolona, ho an’ny rehetra, ho azo antoka, hatanty voina, ary mateza.
11.1 Mandrapahatongan’ny 2030, miantoka ny fahafahan’ny rehetra mahazo trano fonenana sy fikarakarana fototra mifanaraka amin’ny ilainy sy azo antoka, taka-bidy sy manadio ireo tanana feno trano tsy manara-penitra.
11.2 Mandrapahatongan’ny 2030, miantoka ny fisitrahan’ny rehetra ny rafi-pitaterana azo antoka, azo ampiasaina, mateza, taka-bidy amin’ny alalan’ny fanatsarana ny arolozan’ny fifamoivoizana, indrindra amin’ny fampivoarana ny fitaterambahoaka. Jerena manokana ny momba ny olona anaty faharefoana, ny vehivavy, ny ankizy, ny olona manana fahasembanana, ny beantitra
11.3 Mandrapahatongan’ ny 2030, manamafy ny fampivoarana ny tanandehibe ho an’ny rehetra sy ny fahaizamanao handamina sy hitantana miaraka sy mifaningotra ary mateza ny toerana ivelaran’ny mahaolona amin’ny firenena rehetra.
11.4 Manamafy ny ezaka fiahina sy fiarovana ny harembakoka ara-kolontsaina sy ara-boajanahary iraisam-pirenena.
11.5 Mandrapahatongan’ ny 2030, mampihena betsaka ny isan’ny olona maty sy ny isan’ny olona iharan’ny loza, indrindra ny vokatry ny rano. Mampihena betsaka ny sanda ara-toekarena ny fahasimbana vokatry ny loza mivantana, izay refesina amin’ny fampitahana amin’ny harinkarena faobe manerantany. Tsindriana manokana ny momba ny fiahiana ny olona mahantra sy ny olona anaty ny faharefoana.
11.6 Mandrapahatongan’ny 2030, mampihena ny vokadratsin’ny tanandehibe eo amin’ny tontolo iainana isam-batanolona, anatin’izany ny fijerena manokana ny kalitaon’ny rivotra, ny fitantanana ny fako indrindra ny fitantanan’ny kaomina izany.
11.7 Mandrapahatongan’ny 2030, miantoka ny fisitrahan’ny rehetra, indrindra ny vehivavy, ny ankizy, ny beantitra sy ny olona manana fahasembanana, kianja maitso sy toerana ho an’ny daholobe azo antoka.
11.a Manome vahana ny fametrahana rohy miabo ara-toekarena, ara-tsosialy, mikasika ny tontolo iainana eo amin’ny samy toerana an-tanandehibe, manodidina ny tanandehibe sy ambanivohitra amin’ny alalan’ny fanamafisana ny tetipivoaran’ny fampandrosoana eo amin’ny ambaratonga nasionaly sy isam-paritra.
11.b Mandrapahatongan’ ny 2020, mampitombo betsaka ny isan’ny tanandehibe sy ny toerana ivoaran’ny mahaolona izay manana sy mampihatra politika sy drafitrasa mifaningotra ho fampiatina ny rehetra, ho fampiasana voalanjalanja ny loharanonkarena, ho fiatrehana sy ho fanalefahana ny fiovan’ny toetrandro, ary ny fahafahana miatrika loza.
Mamolavola sy manatanteraka ny fitantanana faobe ny tandidon-doza amin’ny ambaratonga rehetra, araka ny lasitra napetraka tany Sendai mikasika ny fanalefahana ny tandindon-doza.
11.c Manampy ny firenena tsy dia mandroso amin’ny alalan’ny tantsoroka ara-bola sy ara-teknika, hanambotra trano mateza sy mahatanty voina amin’ny fampiasana akora eo an-toerana.
Teny roa natambatra ny « VONTADY » dia VONA (fatotra) sy TADY (karazana kofehy vita avy amin‟ny taretra, natao randran-telo, antsoina koa hoe TADY MAHAZAKA). Ny atao hoe « VONTADY » dia « DINA » natao hifampifehezan’ny FOKONOLONA mpiara-belona sy mpiray Faritra mitovy fomba amam-panao ka « VONTADIM-POKONOLONA » no niantsoana azy tamin’izany. N ny […]